လိင်မှုကိစ္စလိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာလိင်မှုကိစ္စနှင့်ဆိုင်သောလိင်မှုကိစ္စကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုသူများအားစိတ်ကျေနပ်မှုအယူအဆ (2014) - Your Brain On Porn မှရှင်းပြနိုင်သည်။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏လိင်ကွဲအမျိုးသမီးသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ဘာစွဲဆန္ဒပြည့်အယူအဆ (2014) ကရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ်
မှတ်ချက်များ - အမျိုးသမီးညစ်ညမ်းအမျိုးသမီးသုံးစွဲသူများနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုအသစ်အရသူတို့သည်ယောက်ျားများအသုံးပြုသူများကဲ့သို့စွဲလမ်းမှုများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေသည့်တူညီသော cue ဓါတ်ပြုမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုများကို“ လေ့လာသင်ယူခြင်း” ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ (စွဲလမ်းရောဂါဗေဒသင်ယူမှုဖြစ်ပါတယ်။ ) လည်းကြည့်ပါ (L) အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်ရုံယောက်ျားများနှင့်အမျှအွန်လိုင်း Porn စွဲအမျှ Be နိုင်သလား, လေ့လာ Says
Cyberpsychol ပြုမူနေ Soc Netw. 2014 Aug;17(8):505-11. doi: 10.1089/cyber.2013.0396.
Laier ကို C1, Pekal J ကို, ကုန်အမှတ်တံဆိပ် M က.
အင်တာနက်စွဲ၏ဆက်စပ်မှာတော့ဘာအသုံးပြုသူများကိုစွဲလမ်းစေပါသည်အပြုအမူဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်အန္တရာယ်မှာထားတဲ့အတွက်အင်တာနက်လျှောက်လွှာဖြစ်စဉ်းစားသည်။ ယောက်ျားနှင့်စပ်လျဉ်းစမ်းသပ်သုတေသနကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းတွေကိုတုန့်ပြန်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်တဏှာ၏ညွှန်းကိန်းများကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် (IPU) တွင်ကျဘာစွဲ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးအပေါ်နှိုင်းယှဉ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမတည်ရှိပါဘူးကတည်းက, ဒီလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလိင်ကွဲအမျိုးသမီးဘာစွဲ၏ခန့်မှန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်တို့ 51 အမျိုးသမီး IPU နှင့် 51 အမျိုးသမီး Non-အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် (NIPU) ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ မေးခွန်းအသုံးပြုခြင်း, ငါတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, ယေဘုယျပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှုများအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်ဘာစွဲ၏ပြင်းထန်မှုအဖြစ် propensity အကဲဖြတ်။ ထို့အပြင် 100 ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအဖြစ်တဏှာ၏ညွှန်းကိန်းတစ်ခုပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အပါအဝင်စမ်းသပ်ပါရာဒိုင်း, ကောက်ယူခဲ့သည်။
ရလဒ်များပိုပြီး arousal အဖြစ် IPU rated ကြောင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုညွှန်ပြခြင်းနှင့် NIPU နဲ့နှိုင်းယှဉ်မှုကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတင်ဆက်မှုပိုမိုတဏှာကဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုမှတပါး, တဏှာ, ပုံလိင်စိတ်နိုးထ rating, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှုမှ sensitivity ကို IPU အတွက်ဘာစွဲဆီသို့သဘောထားတွေကိုခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်တွေနဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုများနှင့်အပြန်အလှန်ကျဘာအသုံးပြုမှုအရေအတွက်ကျဘာစွဲနှင့်ဆက်စပ်မ. ဤရလဒ်သည်ယခင်လေ့လာမှုများအတွက်လိင်ကွဲအထီးအဘို့အအစီရင်ခံသူတို့နှင့်အတူအညီများမှာ.
လိင်စိတ်နိုးထ၏အားဖြည့်သဘာဝနှင့် ပတ်သက်. လေ့လာတွေ့ရှိချက်, သင်ယူမှုနှင့် IPU အတွက်ဘာစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် cue reactivity ကိုနှင့်တဏှာ၏အခန်းကဏ္ဍကို၏ယန္တရားများဆှေးနှေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဘာစွဲကြီးထွားလာအကျိုးစီးပွားနှင့်ဆွေးနွေးလျက်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်အများအပြားလေ့လာမှုများအတွက်ဖြေရှင်းထားပြီးနေစဉ်, သုတေသနအများအားဖြင့်ယောက်ျားအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မူပြီ1 နီးပါးအမျိုးသမီးဘာအသုံးပြုသူများအတိတ်ထဲမှာလျစ်လျူရှုခဲ့ကြသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကျဘာစွဲဆီသို့သဘောထားတွေနှင့် ပတ်သက်. အမျိုးသမီးကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် (IPU) နှင့် Non-အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် (NIPU) ကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာအင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေအဖြစ်ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားအပြုအမူတွေ soft- သို့မဟုတ်အမာခံညစ်ညမ်းပစ္စည်းကိုကြည့်ပါဝင်သည်; webcam ကနေတဆင့်လိင်ချတ်သို့မဟုတ်လိင်ရှိခြင်း, အွန်လိုင်းစာပေနှိုးဆွသောလိင်ဖတ်နေ; သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းလိင်ဆိုင်များ, ချိန်းတွေ့က်ဘ်ဆိုက်များ, ဖိုရမ်များ, ဒါမှမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်သို့မဟုတ်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ (STDs) အတွက်အကြံပေးကိုသုံးနိုင်သည်။2 ဒါဟာအမျိုးသမီးအများအပြားကျဘာ applications များကိုသုံးပါပေမယ့်လူမှုရေးအပြန်အလှန်ခွင့်ပြုပါသောသူတို့ကြိုက်တတ်တဲ့ကြောင်း postulated ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။3,4 လေ့လာရေးအမျိုးသမီးများကိုအမျိုးသားများထက်လျော့နည်းကျဘာကိုသုံးပါနှင့်ယောက်ျားပေါင်းပိုပြီးမကြာခဏညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်နေစဉ်တွင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက် chatrooms သုံးပြီးအမျိုးသမီးအဘို့ရှင်းလင်းစွာ preference ကိုသတင်းပို့ကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ။5-7 အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောဆိုက်ဘာဆက်စ်နှင့်စပ်လျဉ်း။ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည့်ဆိုက်ဘာဆက်ဆတ်ကိုအမျိုးသားများစိတ်ဝင်စားမှုသည်အသက်နှင့်အတူကျဆင်းသွားသော်လည်းအမျိုးသမီးများအလယ်အလတ်အရွယ်နှင့်အတူတိုးပွားလာကြောင်းပြသခဲ့သည်။8 အမျိုးသမီးဘာအသုံးပြုမှုများ၏ပျံ့နှံ့မှုမရှင်းလင်းဖြစ်နေဆဲနေစဉ်, ဒါကြောင့်ကျဘာကိုသုံးပြီးအချို့အမျိုးသမီးကသူတို့ဘာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ပြဿနာများရှိသည်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။1,9-11
အများစုမှာတစ်ဦးချင်းစီပြင်းထန်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ, ဒါပေမယ့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းမှုကိုလေ့လာသူတို့အဖို့နှိုင်းယှဉ်လက္ခဏာတွေအပါအဝင်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်နေ့စဉ်အသက်တာ၌အချို့သောအစီရင်ခံစာပုဂ္ဂလဒိဋ္တိုင်ကြားမှုများ, ကြုံနေရခြင်းမရှိဘဲအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပါ။12,13 ရောဂါဗေဒတွင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှု၏သိမြင်မှု-အပြုအမူမော်ဒယ်မှာတော့နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးစစ်ဗိုလ်ချုပ်များနှင့်တိကျသောရောဂါဗေဒတွင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုပုံမှန်ရှိကြ၏။14 ပထမဦးဆုံးအင်တာနက်ကိုတစ် nondirectional ပြဿနာအသုံးပြုမှုကိုဖော်ပြသည်။ အဆုံးစွန်သောတိကျတဲ့ Internet application များ၏ရောဂါဗေဒအသုံးပြုမှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာတိကျတဲ့ရောဂါဗေဒတွင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်အန္တရာယ်မှာအင်တာနက်လျှောက်လွှာဖြစ်ထင်နေသည်။15,16 ဤအရောဂါဗေဒအပြုအမူတွေ၏ခွဲခြားနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောဆွေးနွေးမှုနေဆဲရှိနေစဉ်, အမူအကျင့်စွဲလမ်းအဖြစ်သူတို့ကိုနားလည်သဘောပေါက်ဆီသို့တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်ရှိသေး၏။12
ဘာစွဲ, hetero- နှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိထားသည်10 ဒါပေမယ့်ကျဘာစွဲအပေါ်လေ့လာမှုများအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးအတွက်ကန့်သတ်ကြသည်။1 Young ကလိင်စိတ်နိုးထနှင့်ဆန္ဒပြည့်ထားချက်အရနှင့်လက်ခံရရှိကျဘာစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးအပါဆုံးဖြစ်သင့်ကြောင်း postulated ။17 အဆိုပါဆန္ဒပြည့်ယူဆချက်ကျဘာမှတဆင့်လိင်စိတ်နိုးထကျဘာစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကအချက်တစ်ချက်ကြောင်းယူဆတယ်။ ဒီ supporting, ကအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းတွေကိုမှပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထလိင်ကွဲအထီးအတွက်ဘာစွဲဆီသို့သဘောထားတွေကိုခန့်မှန်းကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။18 အဆိုပါစာရေးဆရာယန္တရားများနှင့် cue reactivity ကိုနှင့်တဏှာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုသင်ယူယူဆ19,20 IPU အတွက်ဘာစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်သက်ဆိုင်ရာယန္တရားများဖြစ်။ ထို့ကြောင့်သူကကို real-ဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များ၏အရေအတွက်နှင့်ဤအတူစိတ်ကျေနပ်မှုကျဘာစွဲမှ related မဟုတ်စဉ်တွင်ပြဿနာဘာသုံးစွဲသူများ unproblematic ကျဘာအသုံးပြုသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းတွေကိုတုန့်ပြန် သာ. ကြီးမြတ်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်တဏှာပြကြောင်းပြသခဲ့သည်။21 တခြားလေ့လာမှုကျဘာ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီ propensity တစ်ဦးချင်းဝိသေသလက္ခဏာများကြောင့်ထိခိုက်စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီ sensitivity ကိုအထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်တားစီးသို့ကွဲပြား,22 ဒါပေမယ့်အန္တရာယ်များနှင့်စွဲလမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှား covaries မှ sensitivity ကို။23,24 ထို့အပွငျကပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ on- နှင့်အော့ဖ်လိုင်း related ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်25 ကြောင်းကျဘာစွဲအထွေထွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာပြင်းထန်မှုနှင့်အတူ covaries, ထိုသို့ comorbidities မြင့်မားမှုနှုန်းမျှဝေသော။1,18 အများစုမှာလေ့လာမှုများအထီးသင်တန်းသားများနှင့်အတူအမှုကိုပြုပါပြီ။ အမျိုးသမီးများအတွက်နှိုင်းယှဉ်ဒေတာမဟုတ်တဲ့တည်ရှိဖြစ်ကြသည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာတစ်ဦးစမ်းသပ် cue reactivity ကိုပါရာဒိုင်းအတွက်တဏှာ၏ညွှန်းကိန်းများနှင့် ပတ်သက်. NIPU နှင့်အတူအမျိုးသမီး IPU နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်ဘာစွဲဆီသို့သဘောထားတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကအောက်ပါယူဆချက်ရေးဆွဲပြီး:
H1: IPU နှင့် NIPU ကျဘာစွဲသူတို့၏ပြင်းထန်မှုအတွက်ကွာခြား။
H2: IPU နှင့် NIPU အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းတွေကိုသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထအတွက်ကွာခြား။
H3: IPU, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းတွေကိုမှလိင်စိတ်နိုးထ၏ညွှန်းကိန်းများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ sensitivity ကို, ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, နှင့်အထွေထွေရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှုကျဘာစွဲဆီသို့သဘောထားကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသင့်ပါတယ်၌။
ကျနော်တို့ (102 လိင်ကွဲအမျိုးသမီးသင်တန်းသားများကိုလေ့လာMအသက်အရွယ်= 21.83 နှစ်, SD= 2.48 နှစ်ပေါင်း; ) 18-29 နှစ်ပေါင်းအထိ။ သင်တန်းသားများကိုအများပြည်သူအတွက်ကြော်ငြာများအားဖြင့်၎င်း, 2012 အတွက် Duisburg-အက်ဆင်း (ဂျာမဏီ) ၏တက္ကသိုလ်မှစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးသင်တန်းသားများကိုမေတ္တာရပ်ခံနှင့်ပါဝင်မှုစဉ်အတွင်းသူတို့ဥပဒေရေးရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များရှင်းလင်းပြတ်သားစွာညစ်ညမ်းပစ္စည်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြ။ အားလုံးသင်တန်းသားများကိုကြိုတင်စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးသားအကြောင်းကြားခွင့်ပြုချက် ပေး. ပါဝင်မှုများအတွက်အလုပ်ချိန်နာရီနှုန်း (10 €) ပေးဆောင်ခဲ့သည်။ ပညာရေး၏ mean နှစ်ပေါင်း (12.82 ခဲ့သည်SD= 0.57) ။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုဒေသခံတစ်ဦးကျင့်ဝတ်ကော်မတီကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုကွန်ပျူတာ-based ဓာတ်ခွဲခန်း setting ကိုပြုခံခဲ့ရသည်။ တစ်ခုချင်းစီပါဝင်သူလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်လျှောက်လုံးတဦးတည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများကတက်ရောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1 နာရီကိုယူ။
Döringအားဖြင့်အဓိပ္ပါယ်အဆိုအရ,2 သင်တန်းသားများကိုသူတို့တစ်တွေပုံမှန်အများအပြားကျဘာ applications များ (: Yes / No တုံ့ပြန်မှုပုံစံ) ကိုအသုံးရှိမရှိဟုမေးခဲ့သည်။ ဤအချက်အလက်အသုံးပြုခြင်း, ငါတို့အောက်ပါအုပ်စုများသို့နမူနာကွဲကွာ: (က) ပုံမှန် (IPU) ပေါ်တွင်အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်း (အမာခံရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများ) စောင့်ကြည့်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသမီးအင်တာနက်ကို (NIPU) ရက်နေ့တွင်အမာခံညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်မရ; (ခ) noninteractive သို့မဟုတ်လုံးဝမကျဘာ applications များ (NICU) ကိုသုံးပြီးပုံမှန် (ပြန်လည်သက်သာလာခြင်း) အပေါ်အပြန်အလှန်ကျဘာ applications များ (sexchats, webcam, နှင့် / သို့မဟုတ်ချိန်းတွေ့က်ဘ်ဆိုက်များ) သုံးပြီးအမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသမီး။
ဘာစွဲဆီသို့သဘောထားတွေကိုအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်ခြင်း (s-IAT) ၏ဂျာမန်ရေတိုဗားရှင်းဖြင့်တိုင်းတာခဲ့ကြသည်26 ယေဘုယျအား (s-IATsex) တွင်ကျဘာအဘို့ပြုပြင်မွမ်းမံ။ S-IAT 12 ပစ္စည်းများပါဝင်သည်နှင့် Two-factorial ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ( "ထိန်းချုပ်မှု / အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု၏အရှုံး" နှင့် "တဏှာ / လူမှုရေးပြဿနာများ") ရှိပါတယ်။ သည်အခြားလေ့လာမှုများမှနှိုင်းယှဉ်,18,21 ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်ဘာဆက်စ်အတွက် s-IAT ကို“ Internet” နှင့်“ online” စသည့်ဝေါဟာရများကို“ အွန်လိုင်းလိင်လှုပ်ရှားမှု” နှင့်“ အင်တာနက်လိင်ဆိုဒ်များ” ဖြင့်အစားထိုးခြင်းဖြင့်ပြုပြင်ခဲ့သည်။ ပစ္စည်းများကို 1 = "ဘယ်တော့မှ" မှ5= "အလွန်မကြာခဏ" မှစကေးဖြင့်ဖြေကြားခဲ့သည်။ ၁၂ မှ ၆၀ အထိရနိုင်သည်။ (Cronbach ၏α = 12)
ပါဝင်သူများ၏လိင်စိတ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေလိုသောဆန္ဒရှိမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်အတွက်လိင်စိတ်နိုးထမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားဆီးမှုစကေး (SES) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။27 အချက် (၆) ခုကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည့်အချက် (၁) မှ“ လုံးဝသဘောမတူ” (၄) မှ“ လုံးဝသဘောတူသည်” (၄) မှတ်ဖြင့်ပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့သည်။ မြင့်မားသောတန်ဖိုးများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုမြင့်မားခြင်း (Cronbach ၏α = 4) ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ပြနာရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကို hypersexual behavioral inventory (HBI) ကတိုင်းတာသည်။28 မေးခွန်းလွှာတွင်ပျမ်းမျှရမှတ်တစ်ခုသို့ပျမ်းမျှတွက်ချက်နိုင်သော subscales (“ control”,“ coping” နှင့်“ အကျိုးဆက်များ”) သုံးခုပါဝင်သည်။ ပစ္စည်းကိုးခုကို 1 = "ဘယ်တော့မှ" မှ5= "အလွန်မကြာခဏ" မှ (Cronbach ၏α = 0.91) မှဖြေကြားရန်လိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့်7ရက်အတွင်းဇီဝကမ္မသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများကြောင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္တိုင်ကြားမှုများအကဲဖြတ်ရန်, အကျဉ်းချုပ်ကိုလက္ခဏာစာရင်း (BSI)29 အသုံးပြုခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကို 53 = "မှာအားလုံးမဟုတ်" မှ0= "အလွန်အမင်း" မှစကေးအပေါ်4ပစ္စည်းများအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြင်းထန်မှုအညွှန်းကိန်း (GSI) ကိုယေဘူယျစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်ပေးမှု (Cronbach ၏α = 0.96) အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ထို့အပြင်တက်ရောက်လာသူများကနောက်ဆုံး7ရက်အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များ၏အရေအတွက်နှင့်နောက်ဆုံး6လခနျ့ဟုမေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များ (03= "အလွန်ကျေနပ်" ကို = "စိတ်ကျေနပ်မှုမရ") ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်အရည်အသွေးနှင့်အတူရှိဘယ်လိုစိတ်ကျေနပ်မှုအကဲဖြတ်။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းတွေကိုတုန့်ပြန်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထအတွေ့အကြုံကိုအကဲဖြတ်ရန်, ကျွန်တော်တစ်ဦးကိုကျပန်းနိုင်ရန်အတွက် 100 ရုပ်ပုံအမျိုးအစား 10 လှုံ့ဆော်မှုပေးအပ်သည်။ သည်အခြားလေ့လာမှုများမှနှိုင်းယှဉ်,30,31 သင်တန်းသားများကို (5 = = "လိင်အလွန်နှိုးဆွသော" 1 ဖို့ "လိင်နှိုးဆွမဟုတ်") ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထဖို့လေးစားမှုနဲ့ 5-အမှတ်စကေးအပေါ်တွေကိုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ 10 ရုပ်ပုံအမျိုးအစား (10 ဓါတ်ပုံတွေကိုအသီးအသီး) တယောက်သောသူနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦး (လိင်အင်္ဂါလိင်ဆက်ဆံမှု, စအိုလိင်ဆက်ဆံနှင့်နှစ်ဦးကိုပါးစပ်လိင်အမျိုးအစား), လိင်တူဆက်ဆံလိင် (tribadism နှစ်ယောက်အထီးအကြားနှစ်ဦးကိုအမျိုးသမီး, စအိုနှင့်ပါးစပ်လိင်အကြားပါးစပ်လိင်အကြားလိင်ကွဲလိင်ပါဝင်သည် ), အဖြစ်တစ်ခုတည်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်း။ (t1) ခြင်းမပြုမီနှင့် (t2) ပြီးနောက်စမ်းသပ်ပါရာဒိုင်း, သင်တန်းသားများကို = "အလွန်လိင်နှိုးဆွ" =0ဖို့ "လိင်နှိုးဆွခြင်းမရှိ" 100 မှမိမိတို့လက်ရှိလိင်စိတ်နိုးထညွှန်ပြဖို့တောင်းနှင့်0မှ = "မလိုအပ်ထံမှ masturbate သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ခဲ့ကြသည် masturbate ရန်အလွန်ကြီးမြတ်လိုအပ်ကြောင်း "100 = ဖို့" masturbate ။ "ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာတစ်ဦးချင်းစီ reactivity ကိုတစ်ဦးညွှန်ပြချက်အတိုင်း, t1 မှာလိင်စိတ်နိုးထတစ်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရမှတ် (craving2 Δ) တွင်ရရှိလာတဲ့, t1 မှာလိင်စိတ်နိုးထထံမှနုတ်ခံခဲ့ရသည်။ masturbate ရန်လိုအပ်ကြောင်း (craving2 Δ) အတွက်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရမှတ်တူညီထုံးစံ၌တွက်ချက်ခဲ့သည်။
နမူနာ၏ s-IATsex သည် ၁၅.၂၆ ဖြစ်သည်။SD= 5.70, အကွာအဝေး 12-40) ။ ပြီးခဲ့သည့်7နေ့ရက်ကာလ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်ယုတ်နံပါတ် (2.05 ခဲ့သည်SD= 2.64) ။ ပြီးခဲ့သည့်6လအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်ယုတ်နံပါတ် (38.13 ခဲ့သည်SD= 46.60) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှု (2.06 ခဲ့သည်SD= 0.84) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များ၏အရည်အသွေးနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှု (2.34 ခဲ့သည်SD= 0.75) ။
သင်တန်းသားများကိုတဝက်, သူတို့တစ်တွေပုံမှန် (IPU အပေါ်အင်တာနက်ပေါ်ရှိအမာခံညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့် / သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုများကြည့်ညွှန်ပြ n= 51) ။ အသက်, ဘာအသုံးပြုမှု, ဘာစွဲ, မေးခွန်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်နှင့် ပတ်သက်. IPU နှင့် NIPU အကြားကွာခြားချက်များမှာပြနေကြသည် စားပွဲတင် 1။ IPU နှင့် NIPU ၏တိကျသော cybersex application များအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုပြသည် စားပွဲတင် 2။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း IPU များအတွက်ပိုမိုတစ်ဦးချင်းစီ, အင်တာနက်ပေါ်မှာ soft- သို့မဟုတ်အမာခံညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကြည့်ညွှန်ပြ။ အခြားအကျဘာပလီကေးရှင်းအသုံးပြုသူအရေအတွက်က IPU နှင့် NIPU အကြားကွဲပြားခြားနားသောမဟုတ်ခဲ့ပေ။ IPU အဘို့, 30 သင်တန်းသားများကိုသူတို့တစ်တွေဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြ။ NIPU အဘို့, 26 ပါဝင်သူတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်သင်တန်းသားများကိုအရေအတွက် (ထိုအဖွဲ့များအကြားχကွာခြားခဲ့ပါဘူး2 (1, N= 102) = 1.44, p= 0.23) ။ 18 (NICU) ထိုသို့သောအသုံးပြုမှုကိုငြင်းပယ်နေချိန်မှာအပြန်အလှန်ကျဘာမြားနှငျ့ ပတျသကျ. 84 သင်တန်းသားများကို (ပြန်လည်သက်သာလာခြင်း), သူတို့ sexchats အသုံးပြုခဲ့တဲ့ webcam ကနေတဆင့်လိင်ညွှန်ပြနှင့် / သို့မဟုတ်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ S-IATsex ရမှတ် (ထိုအဖွဲ့များအကြားကွဲပြားဘူးMပြန်လည်သက်သာလာခြင်း= 17.17, SD= 8.28, MNICU= 14.89, SD= 4.98, t= 1.12, p= 0.28) ။ ဒါကြောင့်အောက်ပါတွက်ချက်မှုတစ်ခုတည်းကိုသာ IPU နှင့် NIPU ဖြေရှင်းရန်။
စားပွဲတင် 1 ။ အသက်အရွယ်, ဘာအသုံးပြုခြင်း, ဘာစွဲ, စစ်တမ်းကောက်မေးခွန်းများနှင့်အများကပျေါထှနျးခဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရန်နှင့်စပ်လျဉ်းအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုသူများနှင့် Non-အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုသူများအကြားကွာခြားချက်များ t လွတ်လပ်သောနမူနာများအတွက်စမ်းသပ်မှုတွေ
စားပွဲတင်2။ အများအပြားကတိကျဘာ Applications ကိုအသုံးပြုခြင်းညွှန်ပြသူကားအဘယ်သူ IPU နှင့် NIPU ပါဝင်အရေအတွက်နှင့်ရာခိုင်နှုန်း
IPU နှင့် NIPU အဘို့စမ်းသပ်ပါရာဒိုင်း၏ရလဒ်များကိုအတွက်သရုပ်ဖော်ကြသည် ပုံ 1။ တို့ကသရုပ်ပြအဖြစ် t မှီခိုအုပ်စုများအတွက်စမ်းသပ်မှုများ, အညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတင်ဆက်မှု (လိင်စိတ်နိုးထတစ်ခုတိုးဖို့ဦးဆောင်Mt1= 14.14, SD= 21.71, Mt2= 27.63, SD= 25.19, t= -5.53, p<0.001, Cohen ကိုရဲ့dမှီခိုနမူနာ = 0.56) နှင့် masturbate ရန်လိုအပ်ကြောင်း (များအတွက်Mt1= 6.13, SD= 12.01, Mt2= 21.06, SD= 26.84, t= -6.85, p<0.001, Cohen ကိုရဲ့dမြေတပြင်လုံးနမူနာအတွင်းမှီခိုနမူနာ = 0.86) သည်။
သဖန်းသီး။ 1 ။ အမျိုးသမီးအင်တာနက်အပြာစာပေအသုံးပြုသူများ (IPU) နှင့်အင်တာနက်မဟုတ်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုသူများအတွက်စမ်းသပ်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတင်ဆက်မှု၏ရလဒ်များ။ အမှားဘားများသည်စံသွေဖီမှုများကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလိင်စိတ်နှိုးဆွစေသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲလွဲချက် (ANOVA) အတွင်း - အချက် (၁၀) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအမျိုးအစားနှင့်အကြား - အချက် (အုပ်စု) တစ်ခုနှင့်ထပ်ခါထပ်ခါတိုင်းတာမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်များသည်ပုံအမျိုးအစား၏သိသာထင်ရှားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသသည် (Wilks's Λ = 10, F(9, 91) = 29.95, p<0.001, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းη2= 0.75) ။ ဆိုလိုသည်မှာရုပ်ပုံအမျိုးအစား ၁၀ ခု၏လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှုန်းကွဲပြားမှုများရှိသည်။ ထို့အပြင်အတွင်း -factor နှင့်ကြား-factor ၏အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် (Wilks's Λ = 10, F(9, 91) = 2.86, p<0.01, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းη2= 0.22) ။ ဤအညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်. IPU နှင့် NIPU အကြားကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြ၏ဆိုလိုသည်။ တို့ကညွှန်ပြထားသကဲ့သို့ t လွတ်လပ်သောအုပ်စုများအတွက်စမ်းသပ်မှုသည် 10 ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအမျိုးအစားကိုဖြတ်ပြီးယုတ်လိင်စိတ်နိုးထအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (IPU အတွက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့MIPU= 2.29, SD= 0.63, MNIPU= 1.76, SD= 0.65, t= 4.20, p<0.001, Cohen ကိုရဲ့dလွတ်လပ်သောနမူနာ = 0.83) အဘို့နှင့် IPU (လိင်စိတ်နိုးထအတွက်အားကောင်းတိုးအစီရင်ခံကြောင်းMIPU= 20.90, SD= 33.06, MNIPU= -1.04, SD= 27.58, t= 3.62, p<0.001, Cohen ကိုရဲ့dလွတ်လပ်သောနမူနာ = 0.72) နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတင်ဆက်မှုကြောင့် masturbate ရန်လိုအပ်ကြောင်းအတွက် (MIPU= 19.67, SD= 23.51, MNIPU= 10.10, SD= 19.20, t= 2.24, p<0.05, Cohen ကိုရဲ့dလွတ်လပ်သောနမူနာ = 0.45) သည်။
IPU နှငျ့ ပတျသကျ. s ကို-IATsex စမ်းသပ်ပါရာဒိုင်းနှင့်မေးခွန်း၏ variable တွေကိုဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ ရလဒ်များအတွက်သရုပ်ပြကြသည် စားပွဲတင် 3။ အချိန်ကို (နောက်ဆုံး7နေ့ရက်ကာလ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များ၏အရေအတွက်နှင့်အတူဆက်စပ်မတစ်ပတ်ကိုယေဘုယျအားကျဘာပေါ်ကုန်r= 0.04, p= 0.77) သို့မဟုတ်ကနောက်ဆုံး6လ (r= - 0.05, p= 0.71) မအကြိမ်ရေနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူ (r= 0.20, p= 0.16) သို့မဟုတ်အရည်အသွေး (r= 0.15, pလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ် = 0.30) ။ S-IATsex (ကနောက်ဆုံး7နေ့ရက်ကာလ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်အရေအတွက်ကိုဆက်နွယ်နေကြောင်းမr= -0.02, p= 0.90) သို့မဟုတ်ကနောက်ဆုံး6လ (r= -0.14, p= 0.33) မအကြိမ်ရေနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူ (r= -0.06, p= 0.69) သို့မဟုတ်အရည်အသွေး (r= 0.01, pလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ် = 0.95) ။
စားပွဲတင်3။ ကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ, မေးခွန်းလွှာဒေတာများနှင့် IPU အဘို့ဘာအသုံးပြုမှုဖို့ s ကို-IATsex လိင်စိတ်နိုးထ၏ညွှန်းကိန်းများနှင့်၏ Pearson ဆက်စပ်မှု
IPU နှင့်စပ်လျဉ်းတစ် hierarchical ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ S-IATsex ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ကောက်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါ "ညစ်ညမ်းပုံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်" ပထမဦးဆုံးခန့်မှန်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့် s ကို-IATsex ၏ကှဲလှဲ၏ 9.30% ကရှင်းပြခဲ့သည် F(1, 49) = 5.03, p= 0.03 ။ ဒုတိယပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက် craving1 Δနှင့် craving2 Δထည့်သွင်းခြင်းကှဲလှဲရှင်းပြချက်ထဲမှာ (အပြောင်းအလဲများတစ်သိသိသာသာတိုးမှဦးဆောင် R2= 0.15 အတွက်အပြောင်းအလဲများကို F(2, 47) = 4.68, p= 0.01) ။ တတိယလုပ်ကွက်တွင် SES, HBI နှင့် BSI (GSI) ၏ပျမ်းမျှရမှတ်များထည့်သွင်းခြင်း၊ s-IATsex ၏ကှဲလှဲခှဲခွားခှဲခွားခှဲခှဲခွားသိသာမှုသညျသိသိသာသာတိုးတကျလာသညျ။ R2= 0.14 အတွက်အပြောင်းအလဲများကို F(3, 44) = 3.40, p<0.001) ။ မော်ဒယ်တစ်ခုလုံးသိသိသာသာကျန် R2= 0.38, F(6, 44) = 4.61, p≤0.001။ အဆိုပါဆုတ်ယုတ်၏နောက်ထပ်တန်ဖိုးများမှာပြနေကြသည် စားပွဲတင် 4.
စားပွဲတင်4။ hierarchical Regression ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း IPU ၏အုပ်စုအတွင်း၌တစ်ဦးမှီခို Variable အဖြစ် s ကို-IATSex ရမှတ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း
အမျိုးသမီး IPU ကပို arousal အဖြစ်အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ rated နှင့် NIPU နဲ့နှိုင်းယှဉ်မှုကြောင့်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတင်ဆက်မှုပိုမိုတဏှာအစီရင်ခံသောငါတို့လေ့လာမှုပြပွဲ၏အဓိကရလဒ်များကို။ ထိုမှတပါး, ရုပ်ပုံများ၏လိင်စိတ်နိုးထ rating, တဏှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှုမှ sensitivity ကို IPU အတွက်ဘာစွဲဆီသို့သဘောထားတွေကိုခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်တွေနဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုများနှင့်အပြန်အလှန်ကျဘာအသုံးပြုမှုအရေအတွက်ကျဘာစွဲနှင့်ဆက်စပ်မခံခဲ့ရပါ။ ဘာစွဲများ၏ဆန္ဒပြည့်ယူဆချက်လည်းအမျိုးသမီးများအတွက်တရားဝင်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်အထီးအဘို့အအစီရင်ခံသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်လိင်ကွဲ IPU အတွက်ဘာစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒပြည့်ထားချက်အရနှင့်လက်ခံရရှိ၏အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍအလေးပေး။17,18,21
ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထအမျိုးသမီး IPU အတွက်ဘာစွဲဆီသို့သဘောထားတွေကိုခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါတွေ့ရှိချက်စှဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွင်း cue reactivity ကိုနှင့်တဏှာ၏နောက်ခံဆန့်ကျင်ဆွေးနွေးကြရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုသုတေသနအတွက်, cue reactivity ကိုသင်ယူယန္တရားများတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူပြည်တွင်းရေးသို့မဟုတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုတစ်ခုအသင်းအဖွဲ့မှဦးဆောင်လမ်းပြသောထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ရလဒ်အဖြစ်ဖော်ပြထားခဲ့သည်။19 ဂန္အေးစက်၏အကျိုးဆက်အဖြစ်, ယခင်ကြားနေတွေကိုပုမျှော်လင့်အကျိုးဆက်များ၏ဖြစ်ပျက်မှုခန့်မှန်း, အခြေအနေများဖြစ်လာသည်။32 ဆိုလိုသည်မှာတစ် ဦး တစ်ယောက်၏မျှော်လင့်ထားသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုမဖြစ်ပေါ်ပါကမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲရန်လိုအပ်ခြင်းသည်မျှော်လင့်ထားသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြီးမြောက်စေရန်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။20,33 ဒါကြောင့်လိင်စိတ်နိုးထယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွက် mesolimbic activation နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပြသခံခဲ့ရကတည်းက34 ကြောင်းလိင်စိတ်နိုးထအလွန်အမင်းအားဖြည့်တာဖြစ်ပါတယ်,35 နှင့်လိင်စိတ်နိုးထအေးစက်ခဲ့နိုငျသညျ,36,37 ကဘာစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ယန္တရားများသင်ယူဖို့အလွန်အရေးပါမှုပူးတွဲယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ပုံရသည်။ အဆိုပါဆန္ဒပြည့်အယူအဆနှင့်အညီ,21 ယန္တရားများသင်ယူခြင်း cue reactivity ကိုနှင့်တဏှာအတွက်ရရှိလာတဲ့ကျဘာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ရရှိခဲ့သည့်ဆုလာဘ်နှင့်အတူ (ဥပမာ, ကွန်ပျူတာ) တွေကို (ဥပမာထိခိုက်စေ) ပြည်တွင်းရေးတစ်ခုအသင်းအဖွဲ့ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနှင့် / သို့မဟုတ်ပြင်ပသငျ့သညျ။21 ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ပစ္စည်းဥစ္စာအပေါ်သုတေသနနှင့်အခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်အညီ၌ရှိကြ၏။38-43
IPU NIPU နှင့်နှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားများအတွက်ပိုမိုမြင့်မား propensity အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာပြင်းထန်မှုများအတွက်ဓာတ် IPU အတွင်းကျဘာစွဲဆီသို့သဘောထားတွေကိုခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားများအတွက်ပိုမိုမြင့်မား propensity ကျဘာမှတဆင့်ယူဆအပြုသဘောအားကောင်းနှင့်အညီဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျားသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်နိုင်သမျှအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များများအတွက်အရေးမစိုက်နှင့်ဆက်စပ်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုဆက်စပ်ကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်။44,45 ဒီစွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏အဓိက feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားတစ် propensity ကျဘာစွဲများအတွက် predefining တစ်ဦးချင်းဝိသေသကြောင်းယူဆရန်ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ပုံရသည်။ တခြားလေ့လာမှုအထီးစိတ်ဓါတ်များစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ကျဘာအသုံးပြုတွေ့ပြီ။6,46 အဆိုပါတွေ့ရှိချက်ကျဘာစွဲနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာပြင်းထန်မှု covaries ကြောင့်လည်းလိင်ကွဲအထီးအဘို့ယခင်ကပြသလျက်ရှိသည်။18 ထို့အပြင်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကျဘာစွဲနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ပြသလျက်ရှိသည်။ ခံစားချက်မြှင့်တင်ရန်ကျဘာ၏အသုံးချဘာစွဲမှပံ့ပိုးနေတဲ့စွန့်စားမှုအချက်အဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်စေခြင်းငှါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ကြပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများအတွက်လိင်စိတ်နိုးထကိုအသုံးပြုဖို့သူအလူတစ်ဦးချင်းစီအားဖြည့်ခံယူဖို့နဲ့အနှုတ်လက္ခဏာရေရှည်အကျိုးဆက်များလျော့နည်းအသိအမှတ်ပြုကြသည်နေစဉ်ရေတိုပြေးအတွက်ပြဿနာများကိုသို့မဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှယေဘုယျအားဖြင့်လိင် functionalize ပေလိမ့်မည်။ တကယ်တော့သူကလိင်စိတ်နိုးထယေဘုယျအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှောင့်ယှက်ပြသလျက်ရှိသည်။30,47 တမ်းတမှုကအနုတ်လက္ခဏာဆောင်သောအကျိုးဆက်များကိုအနှောင့်အယှက်ပေးသောကြောင့်ဆိုက်ဘာဆက်စ်စွဲစွဲသူများအတွက် ပို၍ ပင်သက်ဆိုင်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလာဒ်များအရအမျိုးသမီးများသည်ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုစွဲလမ်းမှုသည်လက်တွေ့ဘ ၀ အဆက်အသွယ်များနှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်းအကြံပြုသည်။ လိင်ကွဲယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်,21 ပျောက်ဆုံးသို့မဟုတ်ချည်းအစစ်အမှန်ဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များအတွက်လျော်ကြေးငွေကျဘာစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်အဓိကအချက်မဟုတ်ပါဘူး။
ဤလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်လိင်ကွဲအမျိုးသမီးအတွက်ဘာစွဲ၏နားလည်မှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေ။ အမျိုးသမီး IPU များအတွက်လိင်စိတ်နိုးထ ပတ်သက်. တုံ့ပြန်မှုပုံစံများအထီး IPU အတွက်သူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ကြသည်။18,21 ဤရလဒ်သည်လိင်စိတ်နိုးထဒီအပြုအမူကနေရရှိလာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေ၏မျက်နှာကိုအတွင်း reactivity ကို, တဏှာနှင့်မှုများထပ်တလဲလဲကျဘာအသုံးပြုမှု Cue မှဦးဆောင်အေးစက်အကြောင်း, ကြောင်းကိုကျဘာစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွင်းအဓိကယန္တရားအဖြစ်ဆန္ဒပြည့်ယူဆချက်ကိုထောကျပံ့။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာပြင်းထန်မှုကျဘာစွဲအဘို့အအချက်များ predefining အဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်စေခြင်းငှါ။
ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အနာဂတ်လေ့လာမှုများဘာစွဲပေါ်မှာငါတို့တွေ့ရှိချက်ကြောင့်အခြားအကျဘာ applications များ (ဥပမာ, sexchats) ကြောင့်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်မလိင်စိတ်နိုးထ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကန့်သတ်ထားပါသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက် 30 နှစ်ပေါင်းနှစ်အောက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးကန့်သတ်ထားပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာမှာအမျိုးသမီးတဝက်အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းပစ္စည်းကိုကြည့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကလေ့လာမှုကိုအင်တာနက်အတွင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတင်ပြကြသည်ဟုညွှန်ပြသောကြောင့်, တစ်ရွေးချယ်ရေးဘက်လိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြပေလိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှမကောက်သည့်လိင်ကွဲအမျိုးသမီးလူဦးရေအတွက်ဘာကိုအသုံးပြုခြင်း၏အထွေထွေအချိုးအစားပေါ်ရေးဆွဲနိုင်ပါသည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများအကျိုးစီးပွားနှိုင်းယှဉ်အဖွဲ့များနှင့်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဘာစွဲနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ analogue နမူနာအတွက်သရုပ်ပြတွေ့ရှိချက်ပုံတူပွားသင့်ပါတယ်။
1. DJ Kuss, MD Griffiths က။ အင်တာနက်လိင်စွဲ - ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ စွဲသုတေသန & သီအိုရီ 2011; 116: 1-14 ။
၂ ။ လိင်မှုအပေါ်အင်တာနက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု - ၁၅ နှစ်တာသုတေသနကိုဝေဖန်သုံးသပ်ချက်။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာများ, 2; 15: 2009-25 ။
3. SR Leiblum ။ အမျိုးသမီးများ၊ လိင်နှင့်အင်တာနက်။ လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးကုထုံး 2001; 16: 389-405 ။
4. M က Ferree ။ အမျိုးသမီးများနှင့်ဝဘ်: ဆိုက်ဘာဆက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်သက်ရောက်မှုများ။ လိင် & ဆက်ဆံရေးကုထုံး 2003; 18: 385-393 ။
၅။ Cooper, IP McLoughlin, KM Campbell ။ ဆိုက်ဘာအာကာသအတွင်းလိင်:5ရာစုအတွက် update ကို။ CyberPsychology & Behavior 21၊ 2000: 3-521 ။
6 ။ B ကိုပေါလုသည် JW ရှိန်းပြား။ ကျား, မ, ကိုထိခိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ, နှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုရန်တွန်းအား။ လိင်ကျန်းမာရေး 2008 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်; 20: 187-199 ။
7 ။ K သည် Shaughnessy, ES Byers, L ကို Walsh ။ ကျားတူညီနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု: လိင်ကွဲကျောင်းသားများအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွေ့အကြုံကို။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ 2011 ၏မော်ကွန်း; 40: 419-427 ။
8 ။ K သည် Daneback, တစ်ဦးက Cooper က, SA Månsson။ ဘာပါဝင်သူတစ်ဦးကအင်တာနက်လေ့လာမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ 2005 ၏မော်ကွန်း; 34: 321-328 ။
၉။ K Daneback, MW Ross, SA Månsson လိင်မှုဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အင်တာနက်ကိုသုံးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှု၏လက္ခဏာများနှင့်အပြုအမူများ။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးစစ်ဆင်ခြင်း ၂၀၀၆; ၁၃: ၅၃-၆၇ ။
10. BA အစိမ်းရောင်, S ကို Carnes, PJ Carnes ။ လိင်တူဆက်ဆံသူ၊ လိင်ကွဲလိင်တူဆက်ဆံသူ၊ မိန်းမနှစ်ယောက်စလုံးမှယောက်ျားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်နမူနာနမူနာတစ်ခုတွင် Cybersex စွဲပုံစံများဖြစ်သည်။ လိင်အစွဲစွဲမှုနှင့် ၂၀၁၂၊ ၁၉: ၇၇-၉၈ ။
11. တစ် ဦး က Cooper က, CR Scherer, SC Boies, et al ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်မှု - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစမ်းလေ့လာခြင်းမှရောဂါဗေဒဖော်ပြချက်။ Professional ကစိတ်ပညာ: သုတေသန & အလေ့အကျင့် 1999; 30: 154-164 ။
12. တစ် ဦး က Weinstein, M Lejoyeux ။ အင်တာနက်စွဲခြင်းသို့မဟုတ်အင်တာနက်အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း။ ၂၀၁၀ အမေရိကန်မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်အလွဲသုံးစားမှုဂျာနယ်၊ 2010: 36-277 ။
13. KS လူငယ်။ အင်တာနက်စွဲ - လက်တွေ့ရောဂါအသစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခြင်း။ CyberPsychology & Behavior 1998၊ 1: 237-244 ။
14 ။ R ကို Davis က။ ရောဂါဗေဒတွင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုတစ်ဦးကသိမြင်မှု-အပြုအမူမော်ဒယ်။ လူ့အပြုအမူ 2001 အတွက်ကွန်ပျူတာများ; 17: 187-195 ။
15 ။ M က Griffiths က။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်: အင်တာနက်ကိုလိင်စွဲလမ်းများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်ဂယက်ရိုက်။ လိင်သုတေသန 2001 ၏ဂျာနယ်; 38: 333-342 ။
16. GJ Meerkerk, RJJM ဗန်ဒန် Eijnden, HFL Garretsen ။ အင်မတန်အသုံးများသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုခန့်မှန်းခြင်း - လိင်မှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သည်။ CyberPsychology & Behavior 2006; ၉: ၉၀–၁၀၃ ။
17 ။ KS လူငယ်။ အင်တာနက်ကိုလိင်စွဲ: အန္တရာယ်အချက်များ, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်ဆင့်နှင့်ဆေးကုသမှု။ အမေရိကန်အပြုအမူသိပ္ပံပညာရှင် 2008; 52: 21-37 ။
18. M ကအမှတ်တံဆိပ်, C ကို Laier, M က Pawlikowski, et al ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်း - လိင်မှုနှိုးဆွမှုအဆင့်များနှင့်အင်တာနက်လိင်ဆိုဒ်များကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါလက္ခဏာများ၏အခန်းကဏ္။ ။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာ၊ အပြုအမူနှင့်လူမှုကွန်ယက် ၂၀၁၁; 2011: 14-371 ။
19 ။ BL Carter က, ST Tiffany ။ စွဲသုတေသနအတွက် cue-reactivity ကို၏ meta-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ စွဲ 1999; 94: 327-340 ။
20 ။ DC က Drummond ။ ရှေးခေတ်နှင့်ခေတ်သစ်မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏သီအိုရီများ။ စွဲ 2001; 96: 33-46 ။
21 ။ ကို C Laier, M က Pawlikowski, ဂျေ Pekal, လက်ဗွေ Schulte, M ကအမှတ်တံဆိပ်။ ဘာစွဲ: အတွေ့အကြုံရှိလိင်စိတ်နိုးထညစ်ညမ်းနှင့်မစစ်မှန်သောဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်စောင့်ကြည့်သည့်အခါခြားနားချက်ကိုမှန်ကန်စေသည်။ အပြုအမူစွဲ 2013 ၏ဂျာနယ်; 2: 100-107 ။
22 ။ J ကို Bancroft,, CA ဂရေဟမ်, E ကို Janssen, et al ။ အဆိုပါ dual-ထိန်းချုပ်မှုမော်ဒယ်: လက်ရှိအခြေအနေနှင့်အနာဂတ်လမ်းညွန်။ လိင်သုတေသန 2009 ၏ဂျာနယ်; 46: 121-142 ။
23 ။ အီး Janssen, D ကို Goodrich, ဖက်စပ် Petrocelli, et al ။ Psychophysiological တုံ့ပြန်မှုပုံစံများနှင့်လိင်ကွဲများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူယောက်ျားအတွက်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ 2009 ၏မော်ကွန်း; 38: 538-550 ။
24 ။ J ကို Bancroft, Z ကို Vukadinovic ။ လိင်စွဲလမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse, ဒါမှမဟုတ်ဘာလဲ? တစ်သီအိုရီမော်ဒယ်ဆီသို့။ လိင်ကိစ္စကိုသုတေသန 2004 ၏ဂျာနယ်; 41: 225-234 ။
25. : D Delmonico, J ကို Miller က။ အင်တာနက်လိင်စစ်ဆေးခြင်းစမ်းသပ်မှု - လိင်ဆိုင်ရာမကျူးလွန်မှုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာမကျူးလွန်မှုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ လိင် & ဆက်ဆံရေးကုထုံး 2003; 18: 261-276 ။
26. M က Pawlikowski, C Altstötter-Gleich, M ကအမှတ်တံဆိပ်။ လူငယ်များ၏အင်တာနက်စွဲမှုစမ်းသပ်မှု၏ဂျာမန်တိုတောင်းသောဗားရှင်း၏အတည်ပြုခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာများ, 2013; 29: 1212-1223 ။
27 ။ DL လက်သမား, E ကို Janssen,, CA ဂရေဟမ်, et al ။ (2010) ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီး / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကြေးခွံ-တိုတိုပုံစံမောင်လေးကလည်း / SES-SF ။ TD Fisher သည် CM Davis က, WL Yarber, SL Davis က, eds ၌တည်၏။ လိင်-related အစီအမံများလက်စွဲစာအုပ်။ လို့ Abingdon ။ Routledge, စစ 236-239 ။
et al 28. RC Reid, DS Li, ​​R ကို Gilliland ။ hypersexual အမျိုးသားနမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုစာရင်း၏စိတ်ချရမှု၊ တရားဝင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး 2011 ခုနှစ်ဂျာနယ်; 37: 359-385 ။
29. J ကို Boulet, MW သူဌေးက။ Symptom Inventory ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်တရားဝင်မှု။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ခြင်း - အတိုင်ပင်ခံနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာဂျာနယ် ၁၉၉၁; 1991: 3-433 ။
30 ။ ကို C Laier, M က Pawlikowski, M ကအမှတ်တံဆိပ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံအပြောင်းအလဲနဲ့မရေရာဒွိဟအောက်တွင်အောင်ဆုံးဖြတ်ချက်နှောင့်ယှက်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ 2014 ၏မော်ကွန်း; 43: 473-482 ။
31 ။ ကို C Laier, လက်ဗွေ Schulte, M ကအမှတ်တံဆိပ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအပြောင်းအလဲနဲ့အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူနှောင့်ယှက်။ လိင်သုတေသန 2013 ၏ဂျာနယ်; 50: 642-652 ။
32. ကို C Martin-Soelch, J Linthicum, M Ernst ။ အစာစားချင်စိတ်အေးစက်: အာရုံကြောအခြေစိုက်စခန်းနှင့်စိတ်ပညာအတွက်ဂယက်ရိုက်။ အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်ဇီဝအမူအကျင့်ဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်များ ၂၀၀၇; 2007: 31-426 ။
33 ။ ST Tiffany, JM Wray ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏လက်တွေ့အရေးပါမှု။ သိပ္ပံ 2012 ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်; 1248: 1-17 ။
34 ။ J ကို Ponseti, အို Granert, အို Jansen, et al ။ အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့ hemodynamic ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုကို အသုံးပြု. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်၏အကဲဖြတ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ 2009 ၏ဂျာနယ်; 6: 1628-1634 ။
35 ။ JR Georgiadis, ML Kringelbach ။ လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသံသရာ: ကအခြားအပျော်အပါးမှလိင်ချိတ်ဆက်ဦးနှောက်ပုံရိပ်သက်သေအထောက်အထား။ Neurobiology 2012 အတွက်တိုးတက်ရေးပါတီ; 98: 49-81 ။
36 ။ H ကို Hoffman ဟာ, အီး Janssen, SL Turner ။ အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်လိင်စိတ်နိုးထ၏ဂန္ထဝင်အေးစက်: ကွဲပြားအသိအမြင်နှင့် conditional လှုံ့ဆော်မှုများ၏ဇီဝဆက်စပ်မှု၏ဆိုးကျိုးများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ 2004 ၏မော်ကွန်း; 33: 43-53 ။
37 ။ T က Klucken, ဂျေ Schweckendiek, CJ Merz, et al ။ conditional လိင်စိတ်နိုးထများ၏ဝယ်ယူများ၏အာရုံကြောလုပ်ဆောင်ချက်: အရေးပေါ်အသိအမြင်နှင့်လိင်၏ဆိုးကျိုးများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ 2009 ၏ဂျာနယ်; 6: 3071-3085 ။
38 ။ AE Goudriaan, MB အထိက de Ruiter, W ကဗန်တွင်းချောက်ကမ်းပါး, et al ။ တစ်ဦး fMRI လေ့လာမှု: abstinent ပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေ, မိုးသည်းထန်စွာဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအတွက် cue reactivity ကိုနှင့်တဏှာနဲ့ဆက်စပ်ဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများ။ စွဲဇီဝဗေဒ 2010; 15: 491-503 ။
39 ။ SM Grüsser, ဂျေ Wrase, S ကို Klein, et al ။ Cue-သွေးဆောင်အဆိုပါ striatum ၏ activation နှင့် prefrontal cortex medial abstinent အရက်သမားအတွက်နောက်ဆက်တွဲ relapse နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Psychopharmacology 2004; 175: 296-302 ။
40 ။ CH Ko, GC လျူ, S ကို Hsiao, et al ။ အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲလမ်း၏ဂိမ်းကစားတတ်ပြီးသူနဲ့ဆက်စပ်ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာ။ စိတ်ရောဂါသုတေသန 2009 ၏ဂျာနယ်; 43: 739-747 ။
41 AB က Parker, DG Gilbert ။ ဆေးလိပ်သောက်သူများနှင့်ဆေးလိပ်မသောက်သူများအတွက်ဆေးလိပ်နှင့်ဆက်စပ်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုသဘောဆောင်သည့်ပုံများမျှော်လင့်နေစဉ် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှု - cue ဓာတ်ပြုမှုအသစ်တစ်ခု။ နီကိုတင်းနှင့်ဆေးရွက်ကြီးသုတေသန 2008; 10: 1627-1631 ။
42 ။ K သည် Starcke, B, Schlereth, D ကိုDomaß, et al ။ အမျိုးသမီးသင်တန်းသားများအတွက်စျေးဝယ်တွေကိုဦးတည် Cue reactivity ကို။ အပြုအမူစွဲ 2012 ၏ဂျာနယ်; 1: 1-6 ။
43 ။ R Thalemann K ကိုWölfling, SM Grüsser။ အလွန်အကျွံဂိမ်းကစားအတွက်ကွန်ပျူတာဂိမ်း-related တွေကိုအပေါ်တိကျတဲ့ cue reactivity ကို။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ 2007; 121: 614-618 ။
44 ။ J ကို Bancroft, E ကို Janssen, D ကိုခိုင်ခံ့, et al ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်-ယူပြီးလိင်တူချင်းအမျိုးသားများတွင်: အလိင်စိတ်နိုးထ၏ဆက်စပ်မှု, ခံစားချက်နှင့်အာရုံခံစားမှုရှာ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ 2003 ၏မော်ကွန်း; 32: 555-572 ။
45 ။ J ကို Bancroft, E ကို Janssen, L ကို Carnes, et al ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်လူငယ်လိင်ကွဲအမျိုးသားများတွင်ယူပြီးအန္တရာယ်: အလိင်စိတ်နိုးထ၏ဆက်စပ်မှု, ခံစားချက်နှင့်အာရုံခံစားမှုရှာ။ လိင်သုတေသန 2004 ၏ဂျာနယ်; 41: 181-192 ။
46. ​​တစ် ဦး က Cooper က, D ကို Delmonico, အီး Griffin-Shelley, et al ။ အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု - ပြpotentiallyနာဖြစ်နိုင်သည့်အပြုအမူများကိုစစ်ဆေးခြင်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးစစ်ဆင်ခြင်း ၂၀၀၄; 2004: 11-129 ။
47 ။ : D Ariely, G Loewenstein ။ ယခုအချိန်တွင်၏အပူ: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ချအပေါ်လိင်စိတ်နိုးထ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ 2006 ပြုလုပ်ခြင်းအပြုအမူဆုံးဖြတ်ချက်၏ဂျာနယ်; 19: 87-98 ။
Cyberpsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့။ ဇူလိုင်လ 2014: 425-430 ။
ြဒပ်မဲ့သော | အပြည့်အဝစာသား PDF ဖိုင်ရယူရန် or HTML ကို | ပြန်လည်ပရင့်ထုတ်ရန် | permissions
တစ်ဗွီဒီယိုဂိမ်းအတွက်မကောင်းပါဖြစ်ခြင်းကြှနျုပျတို့ကိုကငျြ့ဝတျထိခိုက်မခံတဲ့ Make နိုင်သလား
မဿဲ Grizzard, Ron Tamborini ရောဘတ်ဂျေ Lewis က, Lu ကဝမ်, Sujay Prabhu
Cyberpsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့။ သြဂုတ်လ 2014: 499-504 ။
အလုပ်လျှောက်ထားသူများ၏လူမှုမီဒီယာတင်ဆက်မှုများတွင်ထင်ဟပ်သော Big Five Personality စရိုက်များ
ဂျေဝီလီယံ Stoughton, ရီ Foster Thompson ကအာဒံဒဗလျူ Mead
Cyberpsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့။ နိုဝင်ဘာလ 2013: 800-805 ။
Mood နှင့် Neurocognitive ရလဒျအပျေါ Virtual Reality PTSD ကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
ရောဘတ် McLay, Vasudha Ram, ဂျနီဖာ Murphy ကဂျိမ်းစ် Spira, ဒဲနစ် P. Wood က, မာကုဃ Wiederhold, Brenda K. Wiederhold, Scott Johnston, ဒဲနစ်ရိဗ်
Cyberpsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့။ ဇူလိုင်လ 2014: 439-446 ။
Facebook ကိုပီသသူရဲ့ကွာခြားချက်မျက်နှာချင်းဆိုင်: လူမှုစိုးရိမ်တွေထဲမှာလူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့က Web Sites များတိုးပွားသို့မဟုတ် attenuation ဇီဝ arousal ထိတွေ့ပါသလား
Shannon အမ် Rauch, Cara Strobel, Megan Bella, ကို Zachary Odachowski, ခရစ္စတိုဖာ Bloom
Cyberpsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့။ မတ်လ 2014: 187-190 ။
အဘယ်သူသည်ကို Virtual အထောက်အထားသေကြောင်းကြံစည်မှု commits? Facebook ကိုအသုံးပြုသူများနှင့် Quitters အကြားသီးသန့်လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ, အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအတွက်ကွာခြားချက်များ
Stefan Stieger, Christoph ဘာဂါ, Manuel Bohn မာတင် Voracek
Cyberpsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့။ စက်တင်ဘာလ 2013: 629-634 ။